Kwụsị ederede maka Englọ Ọrụ Nchọgharị | Martech Zone
Wenezdee, Machị 21, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
My WordPress template na kachasị Search Search. Eji m nlezianya hazie template m mụtara ọtụtụ ndụmọdụ ole na ole site n'aka mmadụ ole na ole. Ihe niile site na aha peeji nke aha ruo na mkpado abanyela iji pịgharịa ka m nwere ike ịpụ na ya.
Imchọpụta ndebiri blọọgụ m na - arụ ọrụ - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ndị ọbịa m na - abịa site na Nchọgharị Nchọgharị, ọkachasị Google. Agbanyeghi na edebere blog m nke kacha mma maka ihe nchọta ihe, SEO ndị ọkachamara ga-achọpụta na post m abụghị.
Anaghị m ekwughachi isi okwu m na ahịrịokwu mbụ m. Anaghị m eji ụda njikọ na post m. Anaghị m ejikọkarị na nke m ọ gwụla ma ọ bụ eziokwu. Ebe gụrụ a ton nke SEO isiokwu, Enwere m ike ide ndenye ndenye nke ihe m kwesịrị mee na post ọ bụla.
Agaghị m eme ya n'ihi na anaghị m ede maka Search Enjini, M na-ede maka ndị na-agụ. Ọ dị ya ka ọ bụ enweghị ezi obi ịgbanwe ụdị mkparịta ụka m ka ụfọdụ ngwa sọftụwia na ụfọdụ crawler wee nwee ike ịdọrọ ozi m wee depụta isiokwu m maka ọchụchọ isiokwu. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na njin ọchụchọ ahụ nwere ike ịchọta m mfe… M na-eche na onye na-agụ ya na-enwe blog posts.
Ebe ọ bụ na m na-agụ isiokwu ndị ahụ ruo nwa oge, enwere m ike ịhụ mgbe ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ na-eme ya. Naanị okwu ịdọ aka na ntị nye ndị na - ede blọgụ ahụ - M mafere ịgụ ọtụtụ post gị n'ihi ya. N'oge ụfọdụ, m na-akwụsị ịdenye aha.
Zọ ọzọ ịgwa ndị a na-ede blọgụ bụ site na ndị na-ekwu okwu ha… ị na-ahụkarị ndị nkọwa dị iche iche kwa izu ị na-aga na blọgụ ha. Enweghị mkparịta ụka… naanị ikwu okwu ebe a na ebe ahụ ma ndị na - agụ ya alọghachi. Ọ na-atọ m ụtọ ịhụ otu ndị ahụ na blọọgụ m ugboro ugboro. Mụ na ọtụtụ ndị ọbịa m abụrụla enyi - n’agbanyeghi na ahụbeghị m onwe m.
Ndị gị na ahịa azụmaahịa maara nke ọma na nyocha na usoro ọ bụla na-agwa gị na ọ na-esiri gị ike inweta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ karịa idobe ndị dị ugbu a. Ọ bụ atụmatụ imeri onwe gị mgbe ị na-ede ihe iji wuo ntinye Nchọgharị Nchọgharị mana ndị na - agụ ya anaghị enwe obi ụtọ ma ọ bụ rapara na blọgụ gị. Ikwesiri ka ichota ma debekwa tweaking iji nweta ihe oma site na Nchọgharị Nchọgharị.
Edela maka Nchọgharị Nchọgharị. Dee ndị na-agụ akwụkwọ gị.
Mar 22, 2007 na 1: 02 AM
daalụ maka nlele ahụike 🙂
mgbe ụfọdụ n'ịgba mbọ anyị ọnyịnye ọ dị ka anyị na-echefu na enwere ndị na-agụ akwụkwọ n'ezie.
Anaghị m ejikọtakarị na posts nke m ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ikwu n'ezie.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị njikọ na posts nke m. Nke ahụ bụ n'ihi na ọtụtụ oge, posts m anaghị adị ka ha na-eso ibe ha. Ha na-abụkarị naanị na isiokwu nke oge a, enweghị njikọ ọ bụla (ma ọ bụ obere, ọ bụrụ na ọ bụla) na posts ndị gara aga.
Amalitere m blọgụ ma chee na m ga-eme ihe ahụ, dee ka m nweta ọkwa peeji na nke dị otú ahụ, mgbe m malitere ide, ọ dị m ka ọ bụghị m… N'ihi na ọ bụghị! M wee sị na ọ bụrụ na m ga-eme ya, ọ ga-abụ n'usoro m na ọ nweghị ndị ọzọ. Anọ m ịde blọgụ naanị otu ọnwa ma na-amasị m eziokwu ahụ na m na-ewu mmekọrịta ọ bụghị njikọ!
Daalụ, Latimer! Aga m agafe na blọgụ gị (echere m na anyị nwere enyi jikọrọ - JD si Black na Business. Edere blọọgụ gị nke ọma… ị na-emetụ aka n'ọtụtụ isiokwu na-agbawa agbawa, mana ị jiri nkwanye ùgwù nye akụkụ nke arụmụka ahụ wee hapụ isiokwu ahụ ka oghe maka mkparịta ụka.
Agụrụ m ọtụtụ akụkọ na blogosphere gbasara ihe ị kwesịrị na-eme… na m na-eche n'eziokwu na ọtụtụ n'ime ya bụ BS Ọ dị nnọọ ka ịgwa mmadụ otú ha kwesịrị gị na onye ọbịbịa kparịta ụka.
Daalụ maka ịkwụsị na ịza ajụjụ!
Daalụ maka ịkwụsị Doug, dịka m na-ekwu na blọọgụ m, a na m emeghe mgbe niile ịnụ echiche niile ma anyị nwere ike inwe mkparịta ụka nwere ọgụgụ isi maka okwu ọ bụla. Daalụ ọzọ maka ịza ajụjụ.
Naanị m chọrọ ime ka ị mata na ihe i kwuru na-atọ m ụtọ nke ukwuu. M malitere m blọọgụ obere ihe karịrị otu ọnwa gara aga na m na-anọgide na-amụta otú e si eme ihe a, ya mere ndụmọdụ gị na-enyere aka n'ezie n'ihi na ọ na-ada ezi. N'agbanyeghị na ọ dị obere ka m nọ na nke a otu nkeji, a ga m alụ ọgụ maka ọnwụnwa nke ime ihe ọ bụla iji bulie ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọ dị ka mgbawa riri ahụ ma ọ bụ ihe, ị maara? Ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ, a ga m enwerịrị ndị na-agụ akwụkwọ.
Ma ugbu a, m na-agụ gị post na ihe niile na-alaghachikwute m, dị ka obere olu ahụ ejidere n'azụ nke uche m. Onye tara ahụhụ maka inwe uche. "Kwuo ihe ị maara, kwuo ya dịka ị na-ekwu, ha ga-abịa."
Na ịrịọ mgbaghara, n'ezie, na "Ala Nrọ".
Daalụ, Keith. Echere m na onye ọ bụla (ọbụlagodi na mpụga ịde blọgụ) na-achọ nnabata. M na-ahụ onwe m na-ede mgbe ụfọdụ na-eche otú ọ ga-emetụta m SEO, njikọ, diggs, wdg Otu n'ime ihe mere na m dere nke a post bụ na-edebe. onwe m n'ahịrị dịkwa!
Ozi ọma. M na-agbalị ka m ghara ide maka search engines, ma m ga-ekweta na m na-eche banyere ya. Na ụfọdụ utu aha nke m posts (ma ọ bụrụ na ọ na-metụtara a isi omume), m okwu bụ otú e nwere ike ẹmende site search engines. Anaghị m eme nke a ka m nwee ike inwe ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọbịa na saịtị ahụ (Enwere m ụzọ ndị ọzọ nke ịzụ ego m). M na-eme ya n’ihi na achọrọ m ka ndị mmadụ gụọ ihe m ga-ekwu. Olileanya na ha ga-alọghachi wee sonye na mkparịta ụka ahụ. Ịde blọgụ na-atọ ụtọ. M ga-ezute ụfọdụ ezigbo mmadụ ma mụta ọtụtụ ihe na usoro a.
Kwere ya ma ọ bụ na ị kwenyeghị, ị nwere ike dee maka ngwa ọchụchọ NA ndị na-agụ gị.
Ọ na-amasị m iche echiche ma / ma kama ma / ma ọ bụ.
Ohere ọ bụla m nwere ike ịgba gị aka inye ihe ngosi dị otú ahụ? Enweghị m obi abụọ na ọ gaghị ekwe omume - echere m na enwere ike ịme ụzọ abụọ ahụ. Agbanyeghị, enweghị m ike ịchọpụta ihe atụ ọ bụla. (Ikekwe nke ahụ bụ n'ihi na onye edemede ahụ rụrụ ọrụ dị mma nke iji usoro abụọ ahụ.)
Ọ ga-amasị m ịhụ post random nke edere nke ọma ma jiri ya tụnyere akwụkwọ nke edere nke ọma NA-eji usoro maka search engines.
Apr 4, 2007 na 7: 49 AM
N'ihe ize ndụ nke ịda ụda ekele onwe onye kpamkpam, nke a bụ mpempe m mepụtara nke na-enweta okporo ụzọ nchọta dị mma yana nke ndị na-agụ akwụkwọ m na-enwekwa mmasị na ya:
Iwu mgbaaka na-enweghị mkpesa: ị na-arapara n'ahụ ha?
Enwere m ole na ole dị otú ahụ - ka otuto dịrị naanị Chineke!
Ọ bụ ezie na m na-ekweta na m maara ihe ị na-ekwu - mgbe ụfọdụ m skew ọzọ na ihu ọma nke SEO karịa m mgbe niile na-agụ akwụkwọ, ma m obi ụtọ m mgbe niile na-agụ akwụkwọ ka na-abịa azụ n'ihi na ha na-amasị m.
Ọ dị ka mụ na ya nọ Ilker Yoldas' TheThinkingBlog.com: M nnọọ na-agụ ya n'ihi na m na-amasị ya, n'ihi ya, o nwere ike dee SEO na m ga-abụ ebe ahụ dị ka onye na-agụ ya mgbe nile!
Lezie anya na daalụ maka ịzaghachi,
Apr 4, 2007 na 10: 10 AM
Daalụ, Paula. Olileanya, ị were nke a n'ụzọ ziri ezi - mana echere m na ị nyere aka ịkwado ntọala m n'ezie. Okwu gị banyere “mgbaaka enweghị mkpesa” ọtụtụ oge n'amaokwu ole na ole mbụ abụghị eziokwu - ọ na-agụ dị ka SEO bụ ihe kacha mkpa karịa ka ị na-agwa m okwu.
Nzipu ozi a di oke nma,biko ewerela m uzo na-ezighi ezi. Ma n'ime afọ 5 mgbe engines ọchụchọ nwere ike gbasaa data isiokwu na-enweghị mkpa ide maka ha - nke a ọ ga-abụ ụzọ ebumpụta ụwa iji dee akwụkwọ ozi?
N'ụzọ na-emegide onwe, agara m nke a post na Thinking Blog na paragraf nke mbụ nwere 21 njikọ ekele na ya maka njikọ miri emi na blọọgụ ya. Njikọ ndị ahụ bụ naanị maka ngwa ọchụchọ, ọ bụghị maka mụ na gị.
Site na nkwanye ugwu nile!
Apr 4, 2007 na 10: 14 AM
Enweghị mmejọ ewepụtara; daalụ maka ịgụ akwụkwọ m.
Ma ee, n'ezie agaghị m ikwugharị na obi ike dị mkpa SEO nkebi ahịrịokwu ọ bụrụ na achọghị m ka ndị mmadụ chọta ha.
Ewoo, dị otú ahụ bụ ndụ SEO'er…
M na-eche otú dum SEO-Google egwuregwu ga-agbanwe n'ọdịnihu.
Ọ kwesịrị ịbụ njem na-adọrọ adọrọ…
Apr 4, 2007 na 10: 23 AM
Chei! Ugboro abụọ-whew! Daalụ Paula.
Jenụwarị 23, 2008, elekere 4:20 nke abalị
Naanị gụọ akwụkwọ ozi a na ka oge ruru. Apụrụ m otu nzukọ n'izu gara aga nke otu onye ọrụ ibe zara okwu mkparị na weebụsaịtị anyị anaghị agụ akwụkwọ enyi site n'ikwu "ibe ndị a abụghị maka ndị na-agụ akwụkwọ. Ibe ndị a bụ maka igwe ọchụchọ”. Emere m ka m tụọ isi m na anyị erutela n'ụzọ nke njikarịcha na mmadụ na-ahọrọ n'ezie na ibe ndị mmadụ agaghị agụ ya. Na-agba m obi. Mee ka ọ dị elu ka ị na-ekepụta ọdịnaya na-enye ihe ọmụma dị ka echiche mba ọzọ. Ọ baghị uru ikwu, ezigara m mmadụ ole na ole nọ na ụlọ ọrụ m post a.